I-Green Lake Cottage Escape Enhliziyweni Yakho Konke
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Loni
Indawo entsha sha, ethokomele yendlu yechibi izinyathelo ukusuka eGreen Lake enkulu. Kutholakala enhliziyweni yedolobha, uzoba nokuthenga, ukudla, imisebenzi yangaphandle, ibhishi lomphakathi, futhi okubaluleke kakhulu ukujula, kwemvelo, phakathi nezwe, ichibi e-Wisconsin eduze nje! Indawo ekahle yokufinyelela emikhosini neminye imisebenzi unyaka wonke.
Leli khaya lesitayela sestudiyo lingamamitha-skwele angama-600 futhi lingalala ngokunethezeka okungu-6. Umbhede owodwa wendlovukazi, imibhede emibili ephahleni, kanye nendawo yokulala ewusayizi ogcwele yokudonsa usofa kusikhumbuza impilo ye-cabin-life. Ilungele isikhathi somndeni, ukuphumula kwentombi, uhambo lokudoba, ukuphuma kwegalofu, imikhosi ekhethekile, noma izindawo zokuhoxa zezithandani.
Umqondo ovulekile uziqhayisa ngekhishi eligcwele elinezinhlobonhlobo zikagesi, isiqandisi esiwusayizi ogcwele, umenzi wekhofi we-Keurig, i-toaster, i-blender, nazo zonke izinto zasekhishini zokupheka ukudla okumnandi. Isiqhingi sihlala ezimbili kanye netafula lokudlela 4.
Ngaphandle uzothola indawo enkulu kakhulu yokufinyelela ene-firepit. Ukubuka okuhle kwechibi kungatholakala kule ndawo ehlangana nepaki/isiphephelo somphakathi. Indawo yokushisa igesi kanye nezinkuni zonke zinikeziwe ukuze ukwazi ukuchitha amahora ujabulela ukuphila kwechibi.
Ezinye izinsiza zifaka: Ukushisa ne-air-conditioning, wonke amalineni, ama-k-cups, i-microwave, amathawula olwandle, isomisi, izinto zokusula izimonyo, i-Wi-Fi, i-Roku TV, imidlalo yebhodi, nedeski lomsebenzi uma kwenzeka kufona. .
Leli yikhaya lesizini engu-4 futhi lenza indawo ekahle yokubaleka nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe ngemisebenzi yendawo, vakashela kugreenlake. com. Ngokuqashwa kwezikebhe, vakashela ku-bayviewgreenlake. com/BoatRentals.html. 99 izimbobo zegalofu, amamayela namamayela emizila yokuhamba izintaba namabhayisikili, ukudoba okuqondisiwe, nokunye okulindile.
I-HDTV engu-42" ene- I-Amazon Prime Video, I-Netflix, I-Roku
ULoni Ungumbungazi ovelele